I-SP-L09 SOICARE 300ml iinkuni zokutya okuziinkozo 7 Izibane ezikhanyisiweyo eziyimfuneko kwioyile yeoyile yesixhobo sokuhambisa umbane, i-China SP-L09 SOICARE i-300ml yeenkozo zomthi ezi-7 Izibane ezikhanyisiweyo zeoyile eziyimfuneko kwi-aromatherapy ye-ultrasonic diffuser Abavelisi, abaxhasi, abaFektri - i-Sunpai Industries Limited
I-SOICARE i-300ml yeenkozo zomthi ezi-7 Izibane ezikhokelwayo eziyimfuneko kwioyile ye-aromatherapy ye-ultrasonic
· Ukuvalwa okungenamanzi okuzenzekelayo kunye ne-BPA yasimahla-- Ngomsebenzi wokuvala amanzi ongenawo amanzi, esi sisixhobo sokucoca ulwelo siza kucima ngokuzenzekelayo xa amanzi ephela. Oku kunokukugcina ukhuselekile kwaye ukhusele isixhobo ngokwakho. Isasazi searomatherapy senziwe ngezinto ze-BPA-simahla, eyi-100% engenatyhefu kunye nokusingqongileyo.
· Itekhnoloji ye-Ultrasonic-- Isithambisi sevumba sisebenzisa amaza e-ultrasonic ukukhawulezisa amanzi kunye neoyile eyimfuneko kwitanki, ukuvelisa inkungu epholileyo, kwaye ivumele ivumba ukuba lidade emoyeni, limanzise umoya. Igumbi lakho liya kuzala livumba elimnandi, elinokuqinisekisa ukuba ulale ngcono. Ilungele igumbi lokulala, igumbi lokufundela, iofisi, igumbi lokuhlala, iyoga, i-SPA, igumbi lomntwana, njl.
· Imibala eguqukayo eyi-7 yokuKhanya kwe-LED - Ukukhanya kwe-LED kungasetwa kwibala eli-7 elipholileyo. Ungayijikeleza ngemibala esi-7, okanye usete ngombala omnye otshintshiweyo. Ngotshintsho lombala, inokwenza imeko yothando.
· Isipho esigqibeleleyo-- I-aroma diffuser isebenzisa uyilo lweenkozo zomthi, njengesiqwenga sokuhombisa. Kukhetho olufanelekileyo ukusebenzisa oku njengezipho kubahlobo bakho nakwiintsapho, abathandi.
I-ABS + PC + PP
Inkcazo: DC24V, 12W, 500mA
I-SP-G48 150ml yokhuphiswano lokunyusa umgangatho we-oyile yevumba eliyimfuneko